Miyaan dhunkan karaa aabbahay tallaalay? Iyo su’aalo kale; halkan waxaa ku yaal jawaabaha qaar - TELES RELAY
Wareeg cusub oo xirxirida ayaa hadda ka dhaqan galay England iyo inta badan Scotland, iyo sidoo kale Wales iyo Northern Ireland.
Waa kuwan qaar ka mid ah su'aalahaaga ku saabsan soo saarista tallaalka, xeerarka socdaalka ee caalamiga ah, iyo xirnaanshaha dugsiga.
Su'aalaha et réponses
Hawl gelinta tallaalka
Aabahay 89 jir ah ayaa la tallaalay toddobaad ka hor. Ammaan ma tahay in hadda laabta u galiyo?Waxaa qoray Cheryle Locke
Michelle RobertsTifatiraha Caafimaadka Internetka
Haddii qof la tallaalo, weli waa inuu raacaa sharciyada kala fogeynta bulshada si loo badbaadiyo naftooda iyo kuwa kale.
Runtii, ma jiro wax tallaal ah oo 100% waxtar leh, welina ma cadda in tallaalku ka hortagi doono dadka inay qaadaan oo ay faafiyaan coronavirus, xitaa haddii ay ka hortageyso jirro halis ah iyo dhimasho.
Sidoo kale waa in la xasuusnaado inay qaadanayso dhowr toddobaad tallaalka ka hor intaan lagaa ilaalin. Tallaallada loo yaqaan 'Covid' ee hadda laga helo Boqortooyada Midowday, laba qaadasho, oo u dhexeysa dhowr toddobaad, ayaa lagu talinayaa in la siiyo kahortagga ugu fiican.
Si kastaba ha noqotee, haddii aad horey u haysatay sameeyay xumbo taageero aabbahaa, waxaad xidhiidh dhaw la yeelan kartaa isaga.
Ma runbaa in tallaalku saameyn ku yeelan karo bacriminta?Laga soo bilaabo Patricia, Weston-Super-Mare
Khubarada ayaa sheegaya in aysan jirin wax caddeyn ah in tallaalku saameyn ku leeyahay bacriminta.
Kuwa doonaya inay uur yeeshaan uma baahna inay iska ilaaliyaan uurka tallaalka kadib.
Tallaalku miyuu dhammaan doonaa noloshaada oo dhan ama waxaad u baahan doontaa inaad is-tallaasho 12-kii biloodba mar, sida tallaalka hargabka?Laga soo bilaabo Robert Parker, Warwickshire
Weli ma cadda inta uu difaaca jirku socon karo tallaalka ka dib.
Dadku waxay u baahan karaan in la tallaalo sanadkiiba hal mar ama dhawrkii sanaba mar si loo ilaaliyo.
Ammaan ma tahay in la qaato tallaalka haddii aan xasaasiyad ku qabo penicillin?Laga soo bilaabo James, Bristol
Haa. Xasaasiyadda Penicillin looma qorin sabab caafimaad oo looga hortagi karo qaadashada tallaalka Pfizer-BioNTech ama AstraZeneca-Oxford Covid-19.
Si kastaba ha noqotee, markii lagu weydiisto tallaalkaaga Covid, waa inaad kala hadashaa xasaasiyaddaada shaqaalaha daryeelka caafimaadka si aad u hubiso inaysan jirin sabab kale oo looga hortago.
Dadka nugul ee jira 65 ilaa 70 laguma darin wareega koowaad ee talaalada. Xaqiiqdii miyaan qaadan doonaa tallaalka ka dib kooxda koowaad?Waxaa qoray Ian Cross, Watford
Tallaalku waa markii ugu horreysay loo maamulo kuwa ugu nugul , sida ku cad liiska sagaal koox oo mudnaanta sare leh, oo ka kooban ilaa 30 milyan oo qof oo ku nool Boqortooyada Midowday.
Dadka ku nool guryaha daryeelka, daryeelayaashooda iyo shaqaalaha kale ee safka hore ee NHS ayaa safka hogaaminaya.
Dadka da'doodu tahay 70 ama ka weyn, iyo sidoo kale dadka caafimaad ahaan aad u nugul (da 'kasta ha ahaadeene) waa la talaalayaa waxyar kadib iyo sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah.
Kooxaha talaalka miyaa si joogto ah looga baarayaa coronavirus si aan loo qaadsiin dadka ay ilaalinayaan?Waxaa qoray Ivan Young, Romsey, Hants
Dadka tallaalaya ayaa qaadaya qalabka ilaalinta shakhsiyeed (PPE) ku habboon in laga caawiyo kahortagga faafitaanka fayraska.
Qaarkood sidoo kale horeyba waa loo tallaalay naftooda, sababtoo ah xirfaddooda daryeel caafimaad.
Dhamaadka howl gelinta tallaalka
Xeerarkii ugu dambeeyay ee socdaalka
Gurigayga ma aadi karaa tallaalkayga? Waxaan ku noolahay degmo kale oo leh xumbada taageerada, laakiin waxaan ka diiwaangashan GP-gaaga meelo kale.Laga soo bilaabo Ida, Southend-on-Sea, Essex
Dhamaan England iyo inta badan Boqortooyada Midowday waa hadda xiran dadkuna waa inay guryahooda joogaan.
Si kastaba ha noqotee, waxaa laguu oggol yahay inaad safarto si aad uga qeybgasho ballanta caafimaadka.
Waxaan hadda ku suganahay Gran Canaria Spain waxaan qorsheynayaa inaan ku laabto gurigeyga (London) ilaa 26-ka Febraayo. Ma u baahanahay baaritaanka PCR?Laga soo bilaabo M Rad, London
Waxaad ubaahantahay inaad muujiso cadeynta tijaabada cusub ee coronavirus kahor intaadan bixin, hadii sharciyada cusubi wali dhaqan galayaan, laakiin Xoghayaha Gaadiidka Grant Shapps ayaa sheegay in dhowr nooc oo tijaabooyin kaladuwan la aqbali doono
Toddobaadka soo socda, rakaabka u socdaalaya Boqortooyada Midowday waxay u baahan doonaan inay caddeeyaan bilowga safarkooda inay tijaabiyeen wax aan ka badnayn 72 saacadood ka hor coronavirus.
Imtixaanada PCR waxaa loo tixgeliyaa inay yihiin "heerka dahabka" sababtoo ah heerka saxda ah ee saxda ah ee ay leeyihiin, laakiin natiijooyinka waa in lagu falanqeeyaa shaybaarka, taas oo macnaheedu yahay inay qaadan karaan maalin ama in ka badan inay soo laabtaan.
Dawladdu waxay soo jeedisay in baaritaannada socodka degdegga ah ee dhinaca dambe sidoo kale la aqbali doono. Kuwani way ka dhakhso badan yihiin badanaana way ka sahlan yihiin helitaanka baaritaanka PCR, oo sida caadiga ah ku keena natiijooyin nus saac gudahood.
Inta badan dadka soo galaya Boqortooyada Midowday - oo ay ku jiraan kuwa ka yimaada Spain - waa in sidoo kale la karantiilaa markay yimaadaan 10 maalmood. Waxaa laga yaabaa inaad soo gaabin karto waqtiga gooni-isu-taagga haddii aad bixiso kharashka imtixaanka shan maalmood ka dib, oo ay ku soo noqoto si taban.
Hadda waxaan joogaa Norway. Duulimaadkaygii oo aan dib ugu noqonayo Aberdeen waa 12-kii Janaayo. Anigu waxaan ahay degane rasmi ah, ninkayguna waa norwiiji. Waa maxay shuruudaha imaanshaha?Waxaa qoray Dahliah Aziz, Aberdeen
Laga bilaabo isbuuca soo socda (taariikhda saxda ah ee la xaqiijin doono), waxaa la soo saaray sharciyo cusub oo loogu talagalay dadka safarka ah ee imaanaya UK.
Kahor intaadan duulimaadkaaga ka bixin Norwey, waxaad u baahan doontaa inaad muujiso natiijo xun oo ka timid tijaabadii ugu dambeysay ee baaritaanka coronavirus Tan waxaa ku jira muwaadiniinta Ingiriiska.
Iskotland gudaheeda, cabirkan waa la soo bandhigi doonaa "sida ugu dhaqsaha badan".
Qof kasta oo laga helo cudurka loo yaqaan 'coronavirus' looma oggolaan doono inuu safro. Ciidanka Xuduudaha waxay sameyn doonaan baaritaano toos ah oo lagu ogaanayo dadka imanaya UK kuwa aan si buuxda u hogaansamin doorka waxay wajahayaan ganaax dhan £ 500.
Dadka qaarkiis ayaa laga dhaafi doonaa shuruudaha baaritaanka, oo ay ku jiraan kuwa da'doodu ka yar tahay 11 sano, wadayaasha, iyo dadka ka imanaya aagga safarka guud ama waddamada aan haysan kaabayaasha ay ku sameeyaan tijaabinta - wax yar ayaa jira waxay u badan tahay inay ku jirto Norway.
Waqtigaan la joogo, dadka imanaya Scotland ee ka yimaada Noorway maahan inay is karanoobaan. Laakiin Scotland iyo UK inteeda kale waxay ku xiran yihiin xirnaansho qaran, taas oo macnaheedu yahay waxaad u baahan tahay oo keliya inaad sameyso safarro muhiim ah markaad timid ka dib.
Dhamaadka sharciyada safarka ee ugu dambeeyay
Xiritaanka iskuulka iyo jaamacadaha
Maxay dowladdu u go'aansan weyday inay sanad iyo dib u dhigto dhammaan ardayda iyo ardayda si aan qofna ugu seegin waxbarashadiisa?Waxaa qoray Anne Ellioy, Iver
Ku soo noqoshada sanad dugsiyeedka waa wax dhif ah oo laga tijaabiyo Boqortooyada Midowday (UK), in kasta oo ay aad ugu badan tahay Maraykanka iyo dalal kale.
Wasaaradda waxbarashadda oo ka faalloonaysa bishii Juun ayaa sheegtay in madaxda dugsiyada ay u taalo go’aanka sida ardayda loo bari karo. Tani waxaa laga yaabaa, mararka qaarkood, inay ku jirto go'aanka lagu go'aaminayo in cunugga wax lagu baro da 'kala duwan oo aan ahayn tan lagu muujiyay da'diisa. " Wuxuu intaas ku daray: "Go'aamada noocan oo kale ah waa inay ku saleysnaadaan sababo macquul ah oo xagga waxbarashada ah iyo la tashi lala yeesho waalidiinta."
Si kastaba ha noqotee, ma cadda in istiraatiijiyaddu shaqeyneyso. Falanqaynta cilmibaareyaasha Jaamacadda Durham waxay ogaadeen in ardayda dooratay hal sano ay u badan tahay inay sameeyaan afar bilood horumar ka hooseeya haddii ay hal sano la sameyn lahaayeen dadka kale.
Intaas waxaa sii dheer, kharashka ku haynta ardayga hal sano waa qaali - ilaa £ 6000, oo aad uga badan inta ay ku kacayso, tusaale ahaan, in la siiyo koorsooyinka shilalka ardayda dhibban.
Gabadhaydu waxay dooneysaa inay dib ugu laabato jaamacadda, koorsadu waa onlayn illaa Febraayo laakiin fasalladeeda ayaa lacag laga qaadaa. Ma loo oggol yahay inay soo noqoto?Waxaa qoray Jennifer Carter, Bath
Waxay kuxirantahay halka jaamacadaadu ku taalo UK. England gudaheeda, waxba si cad ugama hor istaagaan inantaada inay ku laabato hoolkeeda, waa haddii aysan ka helin baaritaanka cudurka coronavirus ama ay iskeed gooni isu taageyso. Sidoo kale waa inaysan safrin haddii ay ka muuqato calaamadaha coronavirus.
Ilaa ay raacaan mooyaane koorsooyin wax ku ool ah sida dawada ama ilkaha , ardayda kulleejyada badankood waxaa lagu booriyay inay "joogaan halka ay joogaan hadii ay suurta gal tahay" ilaa ugu yaraan bartamaha Febraayo oo ay bilaabaan waqtigooda khadka tooska ah.
Ardayda ku laabanaysa hoygooda jaamacadeed waa in la imtixaanaa laba jeer markay soo noqdaan ama ay is karantiilaan muddo 10 maalmood ah, sida ay dawladdu sheegtay.
Tilmaamaha tacliinta sare ee England wuxuu sheegayaa inaysan mamnuuc ahayn guuritaanka "haddii loo baahdo", oo ay ku jiraan sameysato qoysas cusub una guurto guryaha la wadaago ama hoyga ardayda , laakiin wuxuu ka digayaa in guuritaanka qoysasku ay leeyihiin halista sare ee gudbinta.
Dawladda Scotland ayaa sidaa leh qorshooyinka soo celinta ardayga waa in lagu horumariyo iyadoo lala tashanayo shaqaalaha iyo ardayda, iyo in dadka imanaya ay noqdaan kuwa jajaban.
Ardayda waxaa loo oggol yahay inay u safraan Wales meel kasta oo ka tirsan Boqortooyada Midowday haddii ay doonayaan inay dib u bilaabaan waxbarashadooda. Si kastaba ha noqotee, Dawlada Wales waxay sheegaysaa in Ardaydu waa inaysan ku laaban ilaa jaamacadooda ay ku amartay inay sidaa sameeyaan, marka ay shaqsiyan wax u baranayaan dib u bilaabayaan.
Dhammaadka xiritaanka iskuulka iyo jaamacadaha
Ma aadi karaa saaxiibbo socod lug ah?Waxaa qoray David Girling, Portishead
England, Scotland iyo Waqooyiga Ireland waad la socon kartaa saaxiib - laakiin lama socon kartid koox.
Jimicsiga waa loo ogol yahay qof aan ku jirin gurigaaga ama xumbo taageero , meel bannaan oo dadweyne ah (tusaale ahaan, baarkinka, xeebta ama baadiyaha).
Waxaad jimicsi la sameyn kartaa hal qof markiiba, mana ahan inaad jimicsi sameyso wax ka badan hal jeer maalintii. Intaas waxaa sii dheer, waa inaadan u safrin meel ka baxsan gobolkaaga.
Wales gudaheeda laguuma oggola inaad la jimicsato qof kale oo ka baxsan gurigaaga ama taageerida xumbada.
Xumboyinka taageerada wali ma loo ogol yahay waalidiinta kelida ah? Tani laguma daboolin ku dhawaaqista Ra'iisul Wasaaraha.Laga soo bilaabo Liz, Sheffield
Xumbada taageerada laguma xusin ku dhawaaqista ra'iisul wasaaraha, laakiin sharciyada isma badalin.
Waad sameysan kartaa a taageer xumbada la leh guri kale oo nooc kasta leh haddii aad tahay qof weyn oo keliya oo la nool hal ama in ka badan oo carruur ah oo da'doodu ka yar tahay 18 sano Juun 12, 2020.
Waalid ahaan, waxaad kaloo sameysan kartaa xumbada taageerada haddii reerkaaga ay ku jiraan canug wali ka yar hal sano bishii Diseembar 2, 2020, ama ilmo naafo ah oo u baahan daryeel joogto ah oo ka yar shan sano.
Xumbada taageerada sidoo kale waxaa lagu sharixi karaa iyadoo kaligaa la noolaado (xitaa haddii daryeel bixiyayaashu ku soo booqdaan si ay kuu caawiyaan), ama haddii aad tahay qofka kaliya ee qaangaarka ah ee reerkaaga ah ee aan u baahnayn daryeel joogto ah dartiis naafada
Waa inaadan la samaysan xumbo taageero qoys ka mid ah xumbo kale oo taageero ah.
Hooyaday waayeelka ah ayaa ah xumbada taageerada laakiin kuma noola meesha (qiyaastii 90 daqiiqo baabuur). Wali ma lay ogol yahay inaan tago iyada?Waxaa qoray Tina Howson, Leicester
Waxba kaa hor istaagi maayaan inaad sii wado xumbadaada taageerada ee hooyadaa. In kasta oo fariinta udub dhexaad u ah xarigga cusub uu yahay in qof walbaa uu joogo gurigiisa meel kasta oo ay suurtagal tahay, tilmaamaha dowladda ayaa sheegaya in laguu oggol yahay inaad ka tagto gurigaaga oo aad u safarto si aad u booqato xumbadaada taageerada (oo aad u dhaafto habeen iyaga la).
Si kastaba ha noqotee, waxaa muhiim ah inaad raacdo tilmaamaha markaad guriga ka baxayso, oo ay ka mid tahay kala fogaanshaha bulshada iyo inaadan la joogin qof kale oo aan ahayn hooyadaa.
Markaad baabuur wadid si aad u aragto, sidoo kale waa inaadan la wadaagin gaarigaaga dad ka baxsan reerkaaga.
Waxaan ahay kalkaaliye caafimaad waxaana ninkayga ka soo kabanayaa kansarka dhiigga ku dhaca. Aadida shaqada macnaheedu waa inaad qatar gasho naftaada. Fasax ma noqon karaa?Laga soo bilaabo Lisha, Fareham
Haddii loo-shaqeeyahaagu xaq u leeyahay, waad weydiin kartaa inaad ka faa'iideysan karto barnaamijka dowladda ee dayactirka shaqada ee ka hortagga coronavirus .
Intaad fasaxa tahay waxaad heli doontaa 80% mushaarkaaga caadiga ah ugu badnaan £ 2500 bishii.
Dowladda ayaa sheegtay in shaqaalaha u baahan in ay daryeelaan kuwa ku tiirsan ay ka faa'iideysan karaan qorshahan.
Haddii aad u shaqeysid NHS-ta, halkaas oo shaqaalaha badankood aysan xaq u lahayn barnaamijka fasaxa, waa inaad la hadashaa loo-shaqeeyahaaga. Loo-shaqeeyayaasha NHS waxaa lagula taliyay inay noqdaan kuwa taageera oo u jajaban sida ugu macquulsan shaqaalaha leh ballanqaadyada daryeelka.
Waxaan ahay 77 jir, ma inaan sii joogaa?Waxaa qoray Maureen Watkins, Sheffield
Jawaabta oo kooban ayaa ah, dhamaanteen waxaan ubaahanahay inaan guriga iska joogno oo aan iska tagno kaliya sababo kooban awgood, sida shaqooyin ama shaqo aan lagu qaban karin guriga.
Haddii sidoo kale laguu tixgeliyo inaad tahay qof aad u nugul caafimaad ahaan, waa in lagu ilaaliyaa oo aad kaliya u baxeysaa ballamo caafimaad, jimicsi, ama haddii ay muhiim tahay.
Dowlada ayaa dejisay liiska xaaladaha ka dhigi lahaa qofka mid aad u nugul . GP-gaagu sidoo kale wuxuu kugu dari karaa liiska bukaanada la ilaaliyo haddii ay u maleeyaan inaad qatar weyn ugu jirto cudur daran.
Si kastaba ha noqotee, haddii aad caafimaad qabto, da'daada iyo nafteeda sabab uma ahan inaad iska ilaaliso.
Dhamaadka xiritaanka jiilaalka
Noocyada cusub ee culeyska
Su'aalo badan oo ku saabsan tallaalada
Barnaamijka dabagalka ee 'NHS Covid'
Wax walba oo ku saabsan coronavirus
Naftayda ilaali oo dadka kale ilaali
Aniga iyo qoyskayga
Ma sharxi kartaa sida noocyada cusub ee fayraska 'Covid virus' loo sii gudbin karo? Waa maxay tan macnaheedu dhab ahaan?
Muxuu virus-kan sida ugu dhaqsaha badan ugu faafayaa haddaan gacmaha dhaqno mar walba?
Sidee ayay shaqaaluhu ku ogaanayaan in tallaalka ay adiga ku siinayaan uusan ka dhicin kaydinta aan habboonayn darteed?
Ammaan ma u tahay haweenka uurka leh iyo carruurtooda inay qaataan tallaalka?
Sideen ku hubin karnaa inuu tallaalku badbaado ku jiro muddada tijaabadaas gaaban?
Marka soo saarista tallaalku ka bilaabmo mudnaanta kooxda 1, dadka kooxdan ka tirsan ee hore u qaatay cudurka 'Covid' ma la tallaali doonaa?
Talaalku ma khasabbaa?
Intee in le'eg ayuu xasaanaddu socon doontaa hal mar oo la tallaalo?
Maxaa la gudboon dadku markay helaan tallaalka coronavirus? U sii wad nolosha sidii caadiga ahayd, xirato maaskaro, ixtiraam xeerarka fogeynta?
Tallaalka Oxford ma yahay mid ku habboon dadka leh habdhiska difaaca daciifka ah, sida dadka qaata tallaalka?
Tallaalka Oxford AstraZeneca ma ka ammaan roon yahay mise ka dhaqan badan yahay tallaalada Pfizer iyo Moderna?
Ninkeygu wuxuu xasaasiyad ku leeyahay ukunta mana qaadan karo tallaalka hargabka maxaa yeelay waxay u isticmaalaan ukumo si ay u koraan tallaalka. Ma la midbaa tallaalada COVID-19?
Faa'iido ma leedahay in la qaato tallaalka Oxford maxaa yeelay waxtar badan ma leh?
Ma awoodi doonaa inaan doorto tallaalka aan qaadan doono?
Tallaalka Moderna ma leeyahay caqabado keydinta iyo qaybinta ah oo la mid ah kuwa tallaalka Pfizer?
Haddii tallaalku guuleysto oo uu tallaalku bilowdo, sideen ku ogaanayaa haddii dadka igu hareeraysan ee meelaha dadweynaha ah la tallaalay?
Waa maxay farqiga u dhexeeya daawaynta leh halista yar ee infekshinka iyo tallaalka kaliya 90% wax ku ool ah?
Waxaan sugayay labo bilood baaritaanka maqaarka maqaarka. Barnaamijka talaalka 'Covid 19' ma wuxuu ka dhigan yahay inaan sugaayo waqti dheer?
Haddii tallaalku uusan noqon doonin mid khasab ah, suurtagal ma u tahay hay'adaha inay ka dhigaan caddeynta tallaalka xaalad soo gelitaan?
Maaddaama tallaalka Pfizer / BioNtech ay tahay in lagu keydiyaa heerkul aad u hooseeya, ma waxaa jiri doona caqabado waaweyn oo xagga saadka ah oo arrintan la xiriira?
Talaalkan cusubi ma ka difaaci doonaa 'Covid' oo loo beddelay mink?
Dhamaadka su'aalo dheeri ah oo ku saabsan tallaalada
Waqtigaan la joogo, barnaamijka baafinta NHS wuxuu u baahan yahay in la rakibo IOS13.5 ama ka sareeya, sidaa darteed uma jaan qaadi karo taleefannada duugga ah. Ma jiraa shaqo agagaarka ah?
Xaaskeyga iyo aniga hada waxaan kala deganahay ilaa aan ka fariisanayo. Waxaan ku noolahay Cumbria, waxay ku nooshahay Fort William. Waa kuwee barnaamijka qorshaynta ee aan isticmaalo?
Waxaan haystaa baar iyo makhaayad waxaanan daawaday warbixintii BBC ee ku saabsan barnaamijka cusub ee NHS iyo QR code. Xagee ka helaa lambar QR?
Waxaan hayaa qalabka gargaarka maqalka ee ku xiriirsan taleefankayga casriga bluetooth, tani saameyn ma ku yeelan doontaa sida barnaamijku u shaqeeyo?
Dhamaadka dalabka raadinta NHS ee la-socodka ah
Waa maxay coronavirus?Badanaa waa la codsaday
Markaad qaadatid fayraska 'coronavirus', ma iska difaaci doontaa?Badanaa waa la codsaday
Waa maxay mudada soo-saaridda ee coronavirus?
Ma coronavirus ayaa ka faafa badan hargabka?
Muddo intee le'eg ayaad jiran kartaa?
Dadka asymptomatic waxaa loo tixgeliyaa inay yihiin "faafiyayaal aamusan" - saami intee le'eg ayaa lagu qiyaasaa tirada dadka sideese ku heshaa?
Maxaa dadka sonkorowga leh loogu soo dari waayey bukaan socod eegtada aadka u nugul ee liistada ma la cusbooneysiin doonaa?
Sidee qatar ugu yahay coronavirus dadka qaba neefta?
Haddii kale dad caafimaad qaba oo naafonimo qaba ma halis weyn ayey ugu jiraan cudurka 'coronavirus'?
Dadka qaba oof wareen ma la kulmi doonaan astaamaha coronavirus-ka khafiifsan?
Iyada oo shaqaalaha muhiimka ahi ay xidhaan nooc maaskaro ah, sidee ayaa loogu talo galay akhristayaasha bushimaha maqla inay fahmaan waxa la sheegayo?
Maxaan sameeyaa haddii qof aan la noolahay uu gooni u goosad yahay?
Dadku ma inay joojiyaan galmada?
Waxaan ahay uur shan bilood ah waxaanan doonayaa inaan fahmo halista ilmaha ku jirta haddii aan cudurka qaado.
Waxaan naas nuujinayaa ilmahayga shanta bilood jira - maxaan sameeyaa haddii aan qaato coronavirus?
Suurtagal ma tahay in lagaa qaado coronavirus eyga ama bisadda?
Dhammaad aniga iyo qoyskayga
Waxaan ahay iskii u shaqeyste Ma dalban karaa dheefaha haddii aanan shaqeyn karin fayraska dartiis?
Ayaa u qalma amaah caalami ah?
Haddii ay tahay inaad is-gooni ahaatid, ma waxaad heli doontaa oo keliya mushahar jirro oo sharci ah mise loo-shaqeeyahaagu ma bixin doonaa mushaharkaaga?
Maxay yihiin fursadaha aan ku heli karo shaqo la xiro / marka qufulku dhammaado
Miyaan u safri karaa Ireland ka dibna dal kale ka dibna ku noqon karaa Ingiriiska oo aan uga sii gudbi karaa Ireland si aan uga fogaado karantiil?
Shaqaalaha muhiimka ah miyay u baahan yihiin in la karantiilo?
Kuwa aan isla degganahay miyayna tahay in la karantiilo aniga daraadday?
Haddii aan u baahdo in aan karantiillo fasax ka dib oo aanan ka shaqeyn karin guriga, miyaa lay siinayaa lacag?
Noo soo dir su'aashaada
Maqaalkani wuxuu u muuqday markii ugu horreysay: https://www.bbc.com/news/world-asia-china-51176409
Amanpour waxay su'aalo ka weydiineysaa Chalamet Woody Allen - Video